မောငျ(စှယျစုံကမျြး): TeamViewer 9.0.32494 Free License ( Activated လုပ်စရာမလိုပဲ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ TeamViewer 9.0.32494 )
TeamViewer 9.0.32494 Free License ( Activated လုပ်စရာမလိုပဲ အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိုင်တဲ့ TeamViewer 9.0.32494 )
TeamViewer ကတော့ လူတိုင်းနီးပါး သိကြမှာပါ။ ကွန်ပျူတာမှာ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပြီး အသုံးဝင်တဲ့ ၊ဆော့ဝဲလ် ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မသိသေးသူများအတွက် ရှင်းပြပါမယ်။ TeamViewer က ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့ စက် တခုခု ဖြစ်လို့ကိုယ်က ပြန်မပြင်တတ်ဘူးဆိုပါတော့။ အဲဒီလိုဆိုရင် အဝေးမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကူညီတောင်းပြီးဝင်ပြင်ခိုင်းလို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးပါ။
အင်တာနက် လိုင်းရှိရုံနဲ့မိမိ ကွန်ပျူတာကနေ တခြားကွန်ပျူတာကို ဝင်ကြည့် လို့ရပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ကို install လုပ်ပြီးတာ နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ You ID နှင့် Password ပြနေပါလိမ့်မည်။ မိမိပေးဝင်ချင်သည့် သူငယ်ချင်းကို ကိုယ်ရဲ့ID နှင့် Password ပေးလိုက်ရင် ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ ကို သူငယ်ချင်းက ၀င်ပြင်ပေးနိုင် မှာဖြစ်ပါ တယ်။ ဆော့ဝဲလ် ကို Activated လုပ်စရာမလိုပဲ Free License အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Download TeamViewer 9.0.32494
အောက်မှာ Free License ဖြစ်အောင် Install နည်းကို ပုံနဲ့ ပြထားပေးပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါ။
ပုံမှာတွေ့တဲ့အတိုင်း How do you want procesed? အောက်မှာ Basic installing ကိုအစက်ပေးပြီး အဲဒီအောက်မှာ How do you want to use TeamViewer? ရဲ့ အောက်မှာ Personal / Non-commeral use ကိုအစက်ပေးပြီး Accept-finish ကို သွားပြီး ဆက်လက် Install လို့ရပါပြီ။ ပြီးရင် Free License အဖြစ် အချိန်ကန့်သတ် မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Author Zaw Min Than at 9:51:00 AM
Labels: Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ, Team Viewer